Development Bank(Development Bank) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको बैंकिङ सेवा अब आइतबार पनि
काठमाण्डौ । सरकारले जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा शनिबार र आइतबार गरी दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। योसँगै विराटनगरमा कर्पोरेट कार्यालय रहेको सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै आइतबार पनि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअन्तर्गत हाल बैंकले प्रदेश नं. १ मा रहेका आफ्ना ३५...
मुक्तिनाथ विकास बैंकको सीईओमा पुनः प्रद्युमन पोखरेल नियुक्त
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पुनः प्रद्युमन पोखरेल नियुक्त भएका छन्। मंगलबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले पोखरेललाई दोस्रो कार्यकालका लागि सीईओ नियुक्त गरेको हो। उनी यसअघि २०७५ जेठ १ गतेबाट बैंकको सीईओको जिम्मेवारीमा थिए। उनको दोस्रो कार्यकाल आगामी जेठ १ गतेबाट लागू ह...
तेस्रो त्रैमाससम्म कस्तो छ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको वित्तीय अवस्था ?
काठमाण्डौ । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकले ७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ। गत वर्षको यही अवधिसम्म बैंकले ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो। यो अवधिसम्म बैंकलाई ७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ...
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक घाटामा, ईपीएस ऋणात्मक, एनपीएलमा भने व्यापक सुधार
काठमाण्डौ । नारायणी डेभलपमेन्ट लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकले २१ लाख ९ हजार रुपैयाँ खु्द घाटा भएको छ। गत वर्षको यही अवधिसम्म बैंकले ५२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो। यो अवधिसम्म बैंकलाई २१ लाख ९ हजार रुपैयाँ सञ्चालन...
तेस्रो त्रैमासमै रु. १ अर्ब बढी नाफा कमाउने पहिलो विकास बैंक बन्यो मुक्तिनाथ
काठमाण्डौ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै १ अर्ब रुपैयाँ बढी खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। यो अवधिमा १ अर्ब बढी नाफा आर्जन गर्ने विकास बैंकहरुमा मुक्तिनाथ पहिलो बन्न सफल भएको छ। आज सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार मुक्तिनाथले समीक्षा अवधिसम्म १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ...
गरिमा विकास बैंक: नाफा १५.६९%ले बढ्दा अन्य सूचकमा कस्तो छ अवस्था ?
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकले ७८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन सफल भएको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा १५.६९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ६७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा...
महालक्ष्मी विकास बैंकको नाफामा उछाल, एनपीएलमा व्यापक सुधार
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म अधिकांश वित्तीय सूचकमा लोभलाग्दो प्रगति गरेको छ। आज सार्वजनिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिसम्म बैंकले ७१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। जुन गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा ७६.९८ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकले ४०...
क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने नेपालकै पहिलो विकास बैंक बन्यो कामना सेवा
काठमाण्डौ । समयसापेक्ष ग्राहकको चाहनाअनुसार नवीनतम प्रविधिमार्फत सेवाहरु प्रवाह गर्दै आएको कामना सेवा विकास बैंकले सर्वसुलभ तथा अत्याधुनिक बैकिङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ क्रेडिट कार्ड सेवासमेत शुभारम्भ गरेको छ। बैंकले आज चैत २१ गतेबाट औपचारिक रुपमा क्रेडिट कार्ड सेवा सुचारु गरी क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने नेपालकै पहिलो विकास...
गरिमा विकास बैंकको एजीएम आज, के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो १५ औँ वार्षिक आज चैत १८ गते आयोजना गर्दैछ। सभा पोखराको बिरौटास्थित होटेल पोखरा ग्रान्डमा बिहान १०ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित हाल कायम चुक्तापुँजी ३ अर्ब ९४ करोड ८१ लाख ८३ हजार १०५.०८ (गरिमाले सराहा विकास बैंक प्राप्ति गरेपछि) को १६ प्रतिशतले हुन आउने ६३ करोड...
गरिमा विकास बैंकद्वारा वार्षिक साधारणसभा आह्वान, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो १५ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो चैत १८ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा पोखराको बिरौटास्थित होटेल पोखरा ग्रान्डमा बिहान १०ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित हाल कायम चुक्तापुँजी ३ अर्ब ९४...
व्यापार विस्तारमा ‘मुक्तिनाथ’ आक्रामक, लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफलका साथ यी सूचकमा अब्बल
काठमाण्डौ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमध्ये मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो व्यापार आक्रामक ढंगले अगाडि बढाइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणबाट मुक्तिनाथको बिजनेस ग्रोथ अन्य राष्ट्रियस्तरका बैंकको तुलनामा निकै अगाडि देखिन्छ। यो अवधिसम्म निक्षेप र कर्जाको हिसाबले मुक्तिनाथ अगाडि रहेको छ। दोस्रो...
महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायद्वारा सपथ ग्रहण
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छने। नेपाल राष्ट्र बैंकमा आज आयोजित एक समारोहबीच अध्यक्ष उपाध्यायलाई डेपुटी गभर्नर डा.निलम ढुंगाना तिम्सिनाले पद तथा गोपनियताको सपथ गराएकी हुन्। आजै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकबाट सञ्चालक पदमा सञ्जय गिरी, दिपककुमार...
महालक्ष्मी विकास बैंकको स्थगित वार्षिक साधारणसभा फागुन १३ मा हुने
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंकको स्थगित २० औँ वार्षिक साधारणसभा फेरि डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिले स्थगित वार्षिक साधारणसभा यही फागुन १३ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। यसअघि बैंकको वार्षिक साधारणसभा पुस २५ गते डाकिएको थियो। तर गणपुरक संख्या...
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् अजेन्डा
काठमाण्डौ । कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्नो १७ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको माघ १८ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो फागुन २० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा नेपालगन्जको कल्पतरु होटेलमा दिउँसो १ बजेदेखि भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी...
विकास बैंकहरुको औसत लाभांशमा ५४.४%को छलाङ, कसले मार्यो फड्को ? (सूचीसहित)
काठमाण्डौ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा औसत लाभांश दर अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा बढेको छ। नेपाल हाल ८ वटा राष्ट्रिस्तरका विकास बैंक छन्। यी विकास बैंकहरुको कुल औसत लाभांश दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा ५४.४० ले बढेको हो। विकास बैंकको गत आर्थिक वर्षमा कुल औसत लाभांश दर १५.७८...